Soomaaliya, North Korea iyo Afghanistan oo saf hore kaga jira dalalka ugu musuqmaauqa badan dunida – Radio Daljir
Diseembar 3, 2013 3:08 b 0
Geneva, December 3, 2013 – Hay?adda caalamiga ah Transparent International ee qiimaysa dhinaca hufnaanta iyo maamul wanaaga, ayaa mar kale soo saartay war-bixin sanadle ah oo ay ku eegayso heerarka musuq-maasuqa dunida iyo sida loogu kala horeeyo.
War-bixinta oo soo baxday maanta ayaa lagu sheegay in dalka Soomaaliya uu weli safka hore kaga jiro dalalka ugu masuq-maasuqa badan dunida.
Qoraalka Transparent International ?ayaa lagu xusay dalalka Soomaaliya, North Korea iyo Afghanistan in ay yihiin kuwa ugu masuq-maasuqa badan, dalalkaas ayaa waxaa weli awood ku leh laaluushka, ka xad-gudubka awoodaha, iyo heshiisyada qarsoodiga ah.
Transparent ayaa sidoo kale xustay in dalalka Denmark, New Zealand iyo Finland ay iyaguna yihiin dalalka ugu musuq-maasuqa yar dunida oo idil, iyagoo qiimaynta hanaan wanaaga kaalin sare ka galay.
Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore oo kale waxay safka hore uga gashay dalalka uu ku baahay musuqmaasuqa iyo wax is daba-marinta hugaamiyaasha iyo wax kasta oo bulshada dhexdeeda yaala.
Madax ka socda Hay?adaha gargaarka Qaramada midoobey oo maanta booqday Jowhar